IUSE abavelisi kunye nabaxhasi - iChina isebenzisa iFektri
Iphepha le-acrylic lika-DHUA, amaphepha e-polycarbonate aphantse aqhekeka, ebanika inzuzo eyahlukileyo ngaphezulu kweglasi ngokokhuseleko nokhuseleko. Iphepha le-acylic kunye nephepha le-polycarbonate lingenziwa ngeendlela ezahlukeneyo zokhuselo kunye nezibuko zokhuseleko, isipili esingaboniyo kunye nezibuko zokuhlola. Cacisa iphepha le-acrylic linokwenziwa kwiimveliso zonogada ezithandwayo.
• Ukhuseleko lwangaphandle kunye nezipili zokhuselo
• Isibuko sokuqhuba kunye nezipili zendlela
• Iipili ezikhuselekileyo zangaphakathi
• Izipili zokhuselo lwabantwana
• Izipili zeDome
Ukuhlolwa nokubukwa kwezipili (ezibuko ezibini)
• Ukuthimla, uKhuselo loKhuselo lokhuseleko
Ukomelela nokuqina, iphepha le-acrylic kunye neemveliso zesipili zisetyenziswa kwizicelo zothutho, izibuko zothutho kunye nezipili zemoto.
• Izipili zeConvex
• Izipili zokujonga ngasemva
I-Acrylic yindlela yeglasi eye yafumana ukuthandwa njengezinto zokwakha. Kunzima, ubhetyebhetye, ayisindi, kwaye inokuphinda iphinde iphinde iphinde isetyenziswe. Izakhelo zepaneli ye-Acrylic ziyahluka ngakumbi kwaye zilungele nayiphi na imeko yokuhlala kuba zikhuselekile kwaye zihlala zomelele. Baya kugcina iifoto kunye nezakhelo kude kakhulu kuneglasi. banokubamba yonke into ukusuka kwiifoto ukuya kubugcisa obuncinci kunye neememorabilia.
• Umbhalo wobugcisa
Ukusebenza kweplastikhi kunye nokuyilwa kweplastiki kuqhume kwindawo yemicimbi. Iplastiki inikezela ngesisombululo esingasindi kodwa esomeleleyo esifumaneka ngemibala eyahlukeneyo, ubukhulu kunye noburhabaxa. Iinkampani zomnyhadala zithanda i-acrylic kuba inokulingana nemixholo eyahlukeneyo yokuhombisa kwaye yomelele ngokwaneleyo ukuba ijongeke intle emva kweziganeko ezininzi.
Iimveliso zephepha ze-DHUA ze-thermoplastic zisetyenziswa ngokubanzi kwimiboniso nakwimiboniso yokubonisa yorhwebo.
• Bonisa iimeko
Ikhadi lokushishina / incwadana / umnini mqondiso
• Iifowusta zeepowusta
I-DHUA ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukholisa iiplastiki, ezinje nge-acrylic, i-polycarbonate, i-polystyrene kunye ne-PETG, ukuphucula nayiphi na imveliso. Ezi zinto zeplastiki zikulungele ukubonisa indawo yokuthenga (i-POP) ukubonisa ukunceda ukuthengisa kunye nokuguqula iibrowser eziqhelekileyo ekuhlawuleni abathengi ngenxa yokukhululeka kokuqamba, iipropathi zobugcisa ezibalaseleyo, ukukhanya okuncinci kunye neendleko, kunye nokuqina kokuqina okuqinisekisa ubomi obude bePOP imiboniso kunye nokulungiswa kwevenkile.